သြဂုတ်လ 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[23 / 08 / 2019] တူရကီအတွက်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်များအတွက်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်!	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[23 / 08 / 2019] Varsak ဘတ်စ်ကားဘူတာဓါတ်ရထားလိုင်းကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ	07 Antalya
[23 / 08 / 2019] သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Soyer ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ Chairman	35 Izmir
[23 / 08 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့မြေအောက်ကွန်ယက်ကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏7ကင်မရာစောင့်ကြည့်ခံနေရ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[23 / 08 / 2019] Haydarpasa မြေအရောင်း Way ကို MI?	34 အစ္စတန်ဘူလ်
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုပြီးစီးသောအခါ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်,3။ ဇာတ်စင်ရထားလိုင်း V-ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းများကသြဂုတ်လ 11 အတွက်လေ့လာရေးခရီးအနေဖြင့်ခရီးစတင်ခဲ့သည်။ Antalyalılar3။ Varsak'ta နှင့်အတူစင်မြင့်ရထားစနစ်လိုင်းမြို့လယ်မှဘတ်စ်ကားဘူတာမှ, ဇာတိမှာ Aksu လေဆိပ်မှခရီးသွား [ပို ... ]
နေ့ ကစ. သူရုံးကိုမကြာခဏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာ Grant က Gokce, ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အာဘော်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ဦးခေါင်း Mehmet Ergenekon, Çiğliမြို့တော်ဝန်Gümrükçüပြောနေကြပါတယ် trams သောအကြီးမားဆုံးအိပ်မက် Cigli ယူ [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်းသြဂုတ်လ 23 1919 Anatolian မီးရထားဦးစီးဌာနအစီရင်ခံစာအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအဘို့ဗြိတိသျှဦးစီးဌာနမှ၎င်းပြင်အော်တိုမန်လိုင်းမှစလှေတျတျောစစ်ပွဲလည်ပင်းစဉ်အတွင်းအော်တိုမန်တပ်ဖွဲ့များကအသုံးပြုရထားလမ်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အခန်းများငှားဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ သြဂုတ်လ 23 1928 Amasya-Ring ကိုလိုင်း [ပို ... ]
တာ့ခ်မင်နစ္စတန်ကသူ့ခရီးစဉ်အတွင်းပင်လယ်ငါးကမ်းရိုးတန်းရေပြင်ပြည်နယ်ကက်စပီယန်ဝန်ကြီးများဖိုရမ်များထဲမှာအီရန်လမ်းများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆွေးနွေးရန်မီးရထားဥက္ကဋ္ဌ Saeed Rasouli, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နှင့်အတူအဇာဘိုင်ဂျန်မီးရထား၏ဝန်ကြီးများ၏မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံပူးတွဲ [ပို ... ]
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဟာမနက်စောစောအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု3၏ပထမဦးဆုံးနေ့ပြီးစီးစမ်းသပ်ပြေးပြီးနောက်ပေးအပ်သည်။ ဘဏ်များ၏မျက်စိမလွတ်ခဲ့ဘူးသောဘတ်စ်ကားဘူတာရုံလမ်းရထားလိုင်းကိုအတွက်စင်မြင့် Varsak ရထားလမ်းမှတ်တိုင်၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်း။ အဆိုပါလမ်းရထားနိုင်ငံသားများ၏ရောက်ရှိစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် [ပို ... ]
စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့, ပါကစ္စတန်-တီဟီရန်-အစ္စတန်ဘူလ်ကွန်တိန်နာရထား 10 ။ အဆင့်မြင့်အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုသြဂုတ်လ 20 21-2019 နေ့စွဲအပေါ်တူရကီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ရထားလမ်းကဏ္ဍအပေါ်နိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့သည်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦး, ပို့ဆောင်ရေး TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Erol ၏အစည်းအဝေး [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (353) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)